कोरोना भाइरसको सङ्क्र*मण भयो भने हाम्रो शरीरमा के हुन्छ ? – Butwal Sandesh
कोरोना भाइरसको सङ्क्र*मण भयो भने हाम्रो शरीरमा के हुन्छ ?
गत डिसेम्बर महिनामा पहिलो पटक भेटिएको नयाँ कोरोनाभाइरस र यसले लगाउने रो´ग कोभिड-१९ अहिले विश्वव्यापी म*हामारी बनिसकेको छ। कसैकसैमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्रै पार्छ भने केहीमा यो रो´ग मृ*त्युको कारण बनिदिन्छ। यो नयाँ भाइरसले कसरी शरीरमा आ*क्रमण गर्छ? यसका कारण किन मानिसको ज्या*न जान्छ ? यसको उपचार कसरी भइरहेको छ त ?
मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस फैलिन र स्थापित हुन केही समय लाग्छ। त्यसलाई ‘इन्क्युबेशन पीरीअड’ अथवा सङ्क्र*मणकाल भनिन्छ। त्यो बेला भाइरसहरूले तपाईँको शरीरमा कोषभित्र पसेर तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छन्।
यदि नजिकै कसैले खोकिरहेको छ भने तपाईँले सास फेर्दा कोरोनाभाइरस (औपचारिक नाम Sars-CoV-2) शरीरमा पस्न सक्छ। दूषित वस्तु वा सतह छोएर आफ्नो अनुहार छुँदा पनि कोरोनाभाइरस शरीरमा छिर्न सक्छ।त्यसले पहिला तपाईँको घाँटीभित्रका कोष, सासनली र फोक्सोलाई असर गर्न थाल्छ। बिस्तारै ती अङ्ग कोरोनाभाइरस उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बन्न पुग्छन् र धेरै भाइरस उत्पादन हुन थाल्छन्। तिनले तपाईँका थप कोषलाई आ*क्रमण गरेर तिनमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छन्। प्रारम्भिक अवस्थामा तपाईँ बि*रामी पर्नुहुन्न। केही मानिसलाई त कहिल्यै कुनै लक्षण नै देखिँदैन। भाइरस स्थापित हुने सङ्क्र*मणकालीन अवधि सरदर पाँच दिनको भएको पाइएको छ।
अधिकांश सङ्क्र*मित मानिसले यो बेहोर्नुपर्छ। कोभिड-१९ भन्ने रो*ग १० मध्ये आठ जनाका लागि सामान्य रो*ग हो। उनीहरूलाई रुघा लाग्ने र ज्वरो आउने गर्छ।
शरीरका अङ्ग दुख्ने, घाँटी दुख्ने र टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छन्। तर ती लक्षण देखिन्छन् नै भन्ने छैन। ज्वरो आउनु र असहज महसुस गर्नु तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएर त्यसले सङ्क्र*मणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको परिणाम हो। यस्तो बेला भाइरस कुनै बाह्य तत्त्व हो भन्ने बुझेर त्यसविरुद्ध लड्न उक्त प्रणालीले साईटकाईन नामक प्रोटीन परिचालन गर्छ।
यस्तो बेला प्रतिरक्षा प्रणाली पूरै सक्रिय हुन थाल्छ। तर सँगसँगै शरीरमा पी*डा हुने र तापक्रम बढ्ने अर्थात् ज्वरो आउने हुन्छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्र*मण भएको बेला सुक्खा खोकी लाग्छ। त्यति बेलासम्म भाइरसहरू कोषमा बिस्तारै सक्रिय हुन थाल्छन्। केही मानिसलाई खकार पनि आउन थाल्छ। यस्ता लक्षण देखिएमा बि*रामीलाई ओछ्यानमा आराम गर्न लगाइन्छ र पर्याप्त झोल कुरा खान दिइन्छ। प्यारासिटामोल पनि दिइन्छ। यति बेला अस्पताल नै लगेर विशेष उपचार गर्न आवश्यक हुँदैन। एक हप्तासम्म रहन सक्ने यो अवस्थामा प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएका कारण अधिकांश बि*रामीहरूलाई निको हुन्छ। तर केही केहीलाई ग*म्भीर प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले बुझेको यत्ति नै हो। तथापि नयाँ अध्ययनले कोही बि*रामीको नाकबाट धेरै सिँगान आउने गरेको पनि देखाएको छ।
यदि रो*ग अझै ग*म्भीर हुँदै गयो भने भाइरसविरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणालीको अधिक सक्रियता त्यसको कारण हुन सक्छ। प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुँदा शरीरमा फैलिने रसायनले शरीरमा ज*लन हुन सक्छ। तर त्यसलाई सा*वधानीपूर्वक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। धेरै ज*लन भइरहे शरीरमा निकै धेरै हा*नि पनि हुन सक्छ।
“भाइरसले प्रतिरक्षा प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउन थाल्यो भने शरीरमा धेरै जलन हुन सक्छ, त्यस्तो बेला के भइरहेको हो थाहा नहुन पनि सक्छ,” किङ्स कलेज लन्डनकी चिकित्सक नथाली म्याक्डर्मट भन्छिन्। फोक्सोमा हुने जलन नै निमोनिया हो। मुखबाट सासनली हुँदै हामीले फेर्ने सास अर्थात् वायु फोक्सोमा भएका ससाना कोठामा पुग्छ। त्यही कोठाबाट अक्सिजन रगतसँग मिसिन्छ र कार्बनडाईअक्साईड बाहिर निस्किन्छ। तर निमोनिया हुँदा ती साना कोठा पानीले भरिन थाल्छन् र त्यसै कारण सास फेर्न क*ठिन हुन्छ। यस्तो बेला कसैकसैलाई त सास फेर्न सहज बनाउने भेन्टिलेटरको सहायता चाहिन्छ। चीनबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार १४ प्रतिशत बि*रामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्।
बि*रामी भएका छ प्रतिशत व्यक्ति मात्र अति ग*म्भीर बि*रामी हुने गरेको पाइएको छ। यति बेलासम्म शरीर निस्तेज हुन थाल्छ र मृ*त्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यति बेला मानिसको रो*ग प्रतिरोध गर्ने प्रणाली नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको हुन्छ र पूरै शरीरभित्र क्ष*ति पुगिरहेको हुन्छ। यस्तो बेला बि*रामीको रक्तचाप ड*रलाग्दो तहमा झरेर अङ्गहरूले काम नगर्ने वा पूरै विफल हुने ‘सेप्टिक शक’ भनिने अवस्था आउन सक्छ।
फोक्सोमा धेरै जलन भएर बि*रामीले सा*स फेर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि बाँच्नको लागि पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो बेला मिर्गौलाले रगत सफा गर्न पनि सक्दैन आन्द्रामा समेत क्ष*ति पुग्न थाल्छ। “भाइरसले यति धेरै ज*लन गराउन थाल्छ कि तपाईँको धेरै अङ्गहरूले काम गर्न छोडिदिन्छन्,” डा. भरत पाखानियाले भने।
यदि प्रतिरक्षा प्रणालीले भाइरसलाई जित्न सकेन भने त्यो शरीरको सबै भागमा पुग्न थाल्छ र त्यसले अझै धेरै क्षति पुर्‍याउन थाल्छ। यस्तो बेलामा गरिने उपचार अलि बढी नै कडा हुने गर्छ। यस्तो बेला एम्को भनिने बाहिरी यन्त्रको सहायताले रगतमा अक्सिजन दिने प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। त्यो कृत्रिम फोक्सोजस्तै हो जसले शरीरको रगतलाई बाक्लो नलीको सहायताले बाहिर निकाल्छ त्यसमा अक्सिजन भर्छ र फेरि भित्र पठाउँछ। तर भाइरसको प्रभाव बढ्दै गएमा क्ष*ति ख*तरनाक तहमा पुग्छ। त्यति बेला अङ्गहरूले शरीरलाई जीवित राख्न सक्दैनन्।
चिकित्सकहरूले यथासम्भव प्रयास गर्दा पनि केही बि*रामीलाई ब*चाउनै नसकिएको अनुभव बताएका छन्। वु*हानको जिन्यितान अस्पतालमा मृ*त्यु भएका पहिला दुई बि*रामीका विषयमा ल्यान्सिट मेडिकल जर्नलमा लेखिएको छ। स्वस्थ भए पनि उनीहरूले लामो समयदेखि धूमपान गर्ने गरेका थिए जसका कारण उनीहरूको फोक्सो कमजोर भएको थियो।
पहिलो बि*रामी एक ६१ वर्षीय पुरुष थिए जो ग*म्भीर निमोनियाबाट पी*डित भएपछि अस्पताल पुगेका थिए। उनलाई सास फेर्न निकै क*ठिन भइरहेको थियो र भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि उनको फोक्सोले काम गर्न सकेन र उनको मुटुले पनि काम गर्न छोड्यो। अस्पताल भर्ना गरिएको ११ दिनपछि उनको ज्या*न गयो। अर्का बि*रामी पनि ६९ वर्षीय पुरुष थिए। उनलाई सा*स फेर्न गाह्रो हुने व्य*था लागेको थियो। उनको उपचार गर्न एम्को नामक उपकरण प्रयोग गरियो। तर त्यो पर्याप्त भएन। ग*म्भीर निमोनिया र रक्तचाप निकै तल झरेपछि सेप्टिक श*कका कारण उनको मृ*त्यु भयो।